Siyaasada Lacag celinta - Kdom
Waad ku mahadsantahay ka adeegashada The Kdom!
Sababo la xiriira dalabkayaga sareeya iyo heerka qancinta macaamiisha 5-xiddigle, waxaan si buuxda u joognaa ma soo noqonayno, ma soo celinayno, ama is weydaarsaneynno alaabadayada.
In DHAQAN Kiisaska, DHAMMAAN DHAQANKA WAA FAHAN
Su'aalaha Inta badan la Isweydiiyo: Maxaad u oggolaan weydo dib-u-soo-celinta, soo-celinta, ama isweydaarsiga?
Sababta aannaan u oggolaanayn soo-celinta iyo soo noqoshada ayaa ah sababta oo ah alaabadayadu aad ayey u xaddidan yihiin oo caado ayey kugu habboon yihiin. Haddii macaamilku go'aansado inuu doonayo inuu soo celiyo shay, ma aha wax aan daabici karno oo sidaas darteed ku dhammaanaya inuu yahay qashin dhammaystiran. Mid ka mid ah waxyaabaha aan qaadno waa in inta badan dadku ay wax ku iibsadaan khadka tooska ah iyagoo raalli ka ah. Had iyo jeer, way ka qoomameeyaan ka dib saacado badan oo ay wax iibsadeen ka dibna la xiriir iibiyaha si ay ugu soo celiyaan sidii ay maskaxdooda wax uga beddeleen. Waxaan u aragnay tan inay tahay dhaqan macaamiil oo aad caadi u ah waana sababtaas waxaan u go'aansanay inay danteena ugu jirto inaan ka saarno siyaasadii u soo celinta bilowga ee aan horey u soo marnay.
Ma rabno inaad arintan u aragto inay tahay wax xun. Koox ahaan, waxaan sameyn doonaa dadaalkeenna saxda ah si aan 100% u hubinno inaan sameyno wax kasta oo aan kari karno si aan macaamiil ahaan kuugu qancinno badeecadaada cusub.
Fadlan hubso inaad dalbaneyso sheyga saxda ah, cabirka, iyo midabka saxda ah. Fadlan hubso inaad akhrido cabbiraadaha lagu dabaqi karo. Haddii ay jiraan wax dhibaatooyin ah gabi ahaanba iyo haddii aad u baahan tahay caawimaad, fadlan nala soo xiriir isla markaaba waan ku soo laaban doonnaa sida ugu dhaqsaha badan.
Si loo yareeyo halista cabirista arrimaha, waxaan ku bixinay shaxdo cabir ah bogaggooda qeexida badeecada kabaha shiraaca ah, kabaha suede, dharbaaxayaal, is dulsaaran, qaabka toms, isku soo duub.
Sheegasho kasta oo ah waxyaabaha qaldamay / burburay / cilladaysan waa in lagu soo gudbiyaa 30 maalmood gudahood ka dib marka sheyga la helo. Xirmooyinka ka lumay gaadiidka dadweynaha, sheegashooyinka oo dhan waa in la soo gudbiyaa ugu dambeyn 30 maalmood kadib qiyaasta taariikhda gaarsiinta. Sheegashooyinka loo arko inay qalad yihiin qaybteenna ayaa laga daboolay kharashkeenna.
Haddii aad ku aragto arrin ku saabsan badeecada ama wax kale oo ku yaal amarka, fadlan noogu soo dir email-ka support@thekdom.com
Cinwaanka soo celinta waxaa loo dejiyay si caadi ah warshadeena. Markaan helno soo celinta soo celinta, ogeysiiska emaylka otomaatig ah ayaa laguu soo diri doonaa. Soo-celinta aan la sheegin ayaa lagu tabarucay sadaqadda kadib 30 maalmood. Haddii warshaddeenu aan loo isticmaalin sidii cinwaanka soo celinta, waxaad ku khasbanaan doontaa wixii alaab-celin kasta oo aad soo celiso.
Cinwaan qaldan - Haddii aad bixiso cinwaan u arko in odaygu uusan ku filnayn, dhoofinta ayaa lagu soo celin doonaa xarunteenna. Waxaad ku qasbanaan doontaa qarashaadka meelaynta mar alla markii aanu ku hubinno cinwaan casriyeysan.
Lama Sheegin - Maraakiibta aan lagaran sheegashada ayaa dib loogu celiyaa xarunteenna waxaana kugu khasbanaan doonta qiimaha meelaynta adiga.
Waxaa soo celiyay macaamiisha - Waxaa ugu wanaagsan in aad nala soo xiriirto ka hor intaadan soo celin wax alaab ah. Annagu soo celin mayno amarradii iibsadaha.
Markaan helno sheygaaga, waan baadhi doonnaa kuna ogeysiin doonnaa inaan helnay soo celintaada
shay. Waxaan isla markaaba kugu soo wargalin doonaa xaalada soo celintaada kadib markaan fiirinno shayga.
Haddii soo-noqoshadaada la oggolaado, waxaan bilaabi doonnaa soo-celinta kaarkaaga deynta (ama habka lacag-bixinta asalka ah).
Waxaad ku heli doontaa dhibcaha maalmo cayiman gudahooda, taas oo kuxiran shuruudaha soosaaraha bixiyahaaga.
Next la xiriir bangigaaga. Badanaa waxaa jira waqti wax qabad ah kahor soo celinta lacag celinta.
Haddii aad waxaas oo dhan sameysay oo aadan wali helin soo-celintaada, fadlan nala soo xiriir
Adiga ayaa mas'uul ka noqon doonta bixinta qarashaadkaaga diritaanka ee soo celinta sheygaaga. Kharashyada dhoofinta waa lama-celin karo.
Haddii laguu soo celiyo lacag celinta, qiimaha dhoofinta soo-celinta ayaa laga goyn doonaa soo-celintaada.
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan sida aad sheygaaga noogu soo celiso, nala soo xiriir
Fadlan, HA QARXIN nala soo xiriir Haddii ay jiraan wax dhibaatooyin ah gabi ahaanba ama haddii aad u baahato nooc gargaar ah.